Mamokatra jamba marobe isan-karazany izahay. Type:
● Jamba ny Venetiana Wood, Jamba Venetiana Bamboo
● Fantsakan-tsolika vita amin'ny alàlan'ny PVC
● Blinds amin'ny alàlan'ny Aluminum
Misy karazany ny rafitra mety mifanaraka amin'ny jamba venetian:
● Rafitra kordra
● Rafitra mifampiresaka
Ny jamba Venetiana, izay antsoina hoe jamba slat na jamba marindrano dia manamboatra safidy tsara ho an'ny ambainy ary afaka mamorona endrika lamaody sy maoderina ao an-tranonao. Izahay dia manana jiro vita amin'ny hazo miloko, jamba vita amin'ny aluminiôma, ary ny vatan'ny vatan-doko vita amin'ny hazo izay tsy mitondra lalina sy mafana amin'ny haingoo, fa manampy anao hifehy tsara ny hazavana sy ny fiainana manokana. Ny jamba venetia fotsy fotsy dia sasany ny jamba mahaliana kokoa azonao vidina, miasa tsara amin'ny tetika loko na fomba fanaovana haingon-trano. Ny jamba mainty hoditra mainty dia matetika miasa koa amin'ny lafiny rehetra. Raha mijery sy mahatsapa bebe kokoa, tsarovy ny haben'ny aluminiana venetian. Tsy mety hiondrika na harefo ny fitaovana matevina, mahatonga ireo mason-tsofina ireo ho an'ny fampiasana an-dakozia sy ny efitra fandroana. Raha tianao kokoa ny fitodiana jamba vita amin'ny hazo, fa mila zavatra mafy kokoa na lafo kokoa, dia andramo ny karazanay jiro venetian hazo. Izy ireo no tena tsara indrindra amin'ny tontolo roa!
Na mitady tady tsy miandany tahaka ny jamba fotsy fotsy ianao na venetian fotsy volo dia mifanentana amin'ny haingon-trano misy tsiro, na mitady hanao fanambarana mazava ianao miaraka amin'ny jamba varavarankely amin'ny feo miloko, azo antoka fa hahita ny lalao tonga lafatra ianao ao amin'ny Dunelm.
Ny jamba venetiana namboarina dia azo alaina amin'ny habeny marobe izay mifanentana amin'ny karazana fikandrana isan-karazany ary mora apetraka kosa, na izany aza, raha manana varavarankely hafahafa ianao, na mila jamba venetian mendrika tonga lafatra naorinao amin'ny fomba sy ny famaritan-tena tianao.
Blinds Venetian dia mety tsara sy mety ho an'ny trano fandraisam-bahiny, haingo trano, kafe, birao, fivarotana, trano ary trano fivarotana varotra.
Previous: Damba vita amin'ny akora
Manaraka: Jamba feno Vonona